Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na Fedora 34/35 - LinuxCapable
Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na Fedora 34/35
October 20, 2021 October 8, 2021 by Jọshụa James
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Brave na Fedora.
Tupu ịga n'ihu na ntinye nke Brave Browser, gbaa iwu a ka ịwụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Fedora gị.
Maka sistemụ dabere na Fedora, ngalaba nchekwa atọ ugbu a kwesịrị ibubata n'otu n'otu na sistemụ gị. Ozugbo emechara, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ịgaghị achọ ibudata ndị a ọzọ iji melite Brave n'ọdịniihu.
Iji gosi na nrụnye Brave gara nke ọma n'ịgbakwunye ebe nchekwa na ndepụta nchekwa gị na Fedora. Biko mee ihe ndị a dnf repolist iwu iji hụ na agbakwunyere na arụ ọrụ.
Categories Fedora Tags Nchọgharị Obi Ike, Fedora 34 Mail igodo
Otu esi etinye & hazie GitLab na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Discord na Fedora 34/35
1 echiche na "Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na Fedora 34/35"
October 9, 2021 na 9: 05 am
Akwụkwọ akụkọ mara mma, Josh. Inwe beta n'akụkụ kwụsiri ike iji nwalee atụmatụ na ndozi ọhụrụ yana ọ na-emelite onwe ya site na dnf dị mma. Amaghị m na enwere ike ime nke a. Daalụ